Laba qarax oo laga maqlay suuqa Bakaaraha xilli uu socday howlgal lagu burburinayo dhismayaasha sharci darada – Radio Daljir
Laba qarax oo laga maqlay suuqa Bakaaraha xilli uu socday howlgal lagu burburinayo dhismayaasha sharci darada
Bosaso, May 19 – Laba qarax oo bamgacmeed ah ayaa maanta lagu tuuray suuqa Bakaaraha ee magaalada Muqdisho. Weeraradan ayaa yimid xilli ay ciidamada maamulka gobolka Banaadir ee dowladda KMG Soomaaliya ay ku howlanaayeen howlgallo lagu burburinayo goobaha ganacsiga ee meelaha sharci darada ku yaala wadooyinka Suuqa Bakaaraha.
Cali Maxamed Cali oo ah sarkaal katirsan ciidamada nabadsugidda Gobolka Banaadir ayaa u sheegay saxaafadda dad waxmagarato ah inay tureen bamka. Waxaa uu tilmaamay weerarkan innay ku dhaawacmeen 5-qof oo rayid ah, waxaana uu intaasi raaciyay inay ciidamadu usoo xireen weerarkan 40-qof oo qaarkood la hubo inay weerarku fuliyeen sida uu sheegay.
Cali Maxamed Cali ayaa dhanka kale tilmaamay, inay sii soconayaan howlgalada lagu burburinayo goobaha ganacsiga ee sida sharci darada ah uga dhisan magaalada Muqdisho.